Mucaaradka Oromada oo magaalooyin muhiim ah ka qabsaday melleteriga Itoobiya.
Saturday September 18, 2021 - 12:24:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo culus ayaa lagasoo sheegayaa jabhadaha kala duwan ee wadanka Itoobiya halkaas oo ay ku loollamayaan ciidamada dowladda Xabashida iyo maleeshiyaad daacad u ah kooxaha mucaaradka.
Wararka ka imaanaya gobolka Oromia ayaa sheegaya in ciidamada mucaaradka qowmiyadda Oromada ay si buuxda ula wareegeen magaalooyin muhiim ah in deegaanno istiraatiiji ah.
Kadib dagaallo qaatay wax ka badan isbuuc ayay ugu dambeyn ciidamada kooxda OLA ugu suurtagashay in ay qabsadaan degmooyin dhaca Koonfurta Itoobiya.
Muuqaal Video ah oo baraha bulshada lagu faafiyay waxaa kasoo muuqanayay dagaalyahannada Oromada oo ku damaashaadaya magaalooyin ay faramaroojiyeen ciidamada abiy axmed.
ilo wareedyo waxay sheegayaan in ciidamada Melleteriga Federaaliga ah si xun loogu jebiyay gobolka Oromia isagoona dib ugurasho weyn sameeyay.
Afhayeen u hadlay maleeshiyaadka OLA ayaa sheegay in ay guulo waaweyn kasoo hooyeen dagaalka ka holcaya gobolka Oromia isagoona ku goodiyay in ay ridi doonaan dowlad goboleedka geed fadhiga u ah maamulka Abiy Axmed ee ka jira gobolka Oromia.
Tan iyo markii ay jabhadaha Oromadu isbahaysi la sameysteen qowmiyadda Tigreeg ayay sii xoogeysanayeen dagaallada ka holcaya gobolka Oromia oo ah mid istiraatiiji ah gobolkan waxaa kutaal magaalada addis ababa ee caasimadda u ah Itoobiya.
Dhinaca kale dirir culus ayaa lagasoo sheegayaa gobolka Amhara, maleeshiyaadka TPLF ayaa shalay guuldarro culus dhabarka loogu saarayay dagaalka ka socday aagga Gonder, mas'uul katirsan ismaamulka amxaarada ayaa lagasoo xigtay in ciidamadoodu ay dib uwaabiyeen ciidamada Tigreega ee isku dayayay in ay kusii siqaan magaalada Gonder oo ah caasimadda 2aad ee Amxaarada.
Isbuucii lasoo dhaafay ayuu ismaamulka Amhara bilaabay howllo lagu qafalaayo nin walba oo gaashaan qaad qori xambaari kara si Tigreega looga difaacyo magaalooyinka waaweyn ee ay duullaanka ku yihiin.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin kooxda TPLF oo ku saabsan guulaha uu ismaamulka Amhara ka sheegtay dagaalladii shalay dhacay.
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo la wareegay magaalo muhiim ah oo katirsan Yemen.
Sarkaal Muqdisho lagu dilay iyo melleteriga Kenya oo Jubbada hoose lagu weeraray.
Maamulka 'Galmudug' oo duullaan ku ah Suufida qabsaday Guriceel.
Melleteriga Suudaan oo sheegay in uu iska caabiyay duullaan uga yimid Itoobiya.
Dad Caraysan oo xiray magaalooyin dhaca bariga dalka Suudaan.